Izao indray dia nivoaka ny laharan’ireo raim-pianakaviana « sexy » indrindra ka ny printsy Harry no mitana ny laharana voalohany ao anatin’izany. Ny 6 mey lasa teo moa ity printsy ity no nahazo an’i Archie zanany, voalohany miaraka amin’i Meghane Markle. Nampihetsi-po ny rehetra ny fizarany tao anaty tambazotra sosialy izany hafaliany nahazo zaza izany, sy ny hasambarana iainany. Mbola latsa-pitia tanteraka amin’ity vadiny ity moa ny printsy Harry ka nampiakatra tanteraka ny lazany izany fanambarana nataony izany. Tia hanihany, tia mitsiky ihany koa no sady mahay mifandray amin’olona ny printsy Harry ka izany no nahazoany mora foana ny laharana voalohany tao anatin’izao fikilasiana nataon’ny tranonkala « People » izao.
2. Eo amin’ny sokajin’ireo lehilahy « sexy » indrindra ho an’ny taona 2019 kosa dia ilay mpihira John Legend no nandrombaka ny laharana voalohany amin’izany. Taorian’ilay mpilalao sarimihetsika, Idris Elba, nahazo ny laharana voalohany tamin’ny herin-taona dia ity mpilalao sarimihetsika 40 taona ity indray no voafidy. Namoaka ny raki-kirany voalohany mitondra ny lohan-teny hoe : « Get Lifted » tamin’ny taona 2004 moa i John Legend. Efa nahazo Emmy iray sy Golden Globe Award iray izy. Somary sahirana kely ihany tenany, araka ny filazany, taorian’izao mari-pamantarana nomena azy izao satria manjary hitsingoloka amin’ny fiainany avokoa ireo mpanara-baovao hijerena raha tena mendrika azy tokoa izany.
3. Vaovao ratsy no nozarain’i Hilaria Baldwin, vadin’i Alex Baldwin tao anaty tambazotra sosialy Instagram tamin’ity herinandro ity. Hafa-jaza indray mantsy izy, ary efa faniefany izao. Efa efa-bolana ity vohoka nentiny ity no izao afaka izao indray. Na izany aza nilaza izy ireo fa miezaka mitraka hatrany manoloana ny zavatra mahazo azy ireo ary faly ihany koa manana ireo zanany efatra manohana azy. Ranomaso sy alahelo no nameno azy taorian’ny fandidiana natrehany fa nisaotra ireo izay nanohana azy hatrany ity vadin’i Alec Baldwin ity ary niangavy ihany koa ny mba tsy hisian’ny « paparazzi » hanelingelina azy ireo amin’ny fakana sary aloha satria fotoana mafy no lalovan’izy ireo.